UMnyango uphenya abashela izingane e-Adams College | Eyethu News
UMnyango uphenya abashela izingane e-Adams College
(Kuyicala ukweshela izingane)
AMASANGO e-Adams College angene ehlazweni ngezinsolo zokuthi kunothisha besilisa ababili abazophenywa ngokushela izingane zesikole sekuphele amasonto amabili bengalubhadi esikoleni. Isithombe: Website.
UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu-Natali u phenya othisha ababili okubikwa ukuthi sekuphele amasonto amabili benyamalele e-Adams College kulandela ukuputshuka kwezindaba zokuthi kunothisha abashela izingane zesikole.
Ezinkundleni zokuxhumana kusabalele ukuthi sekuphele cishe iminyaka eyi-10 lomkhuba ukhona yinto endala kulesi sikole kodwa egqitshwayo ngothisha abafundisa kulesi sikole.
Omunye owayefunda kulesisikole ukhale ngokuthi ngendlela lesisikole ebesinedumela ngayo ngokukhiqiza abantu abaseqophelweni eliphezulu okubalwa uJohn Langalibalele Dube, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, uNkosazana Dlamini-Zuma, u-Epainette Mbeki (ongumama kaThabo Mbeki) nabanye abaningi lokhu osekwenzeka manje kuthunaza isithunzi sesikole nomlando waso.
Okunye okukhalwa ngakho wukuthi othisha obekumele badlale indima kababa ezinganeni babona izintombi baze bazikhulelise kokunye baziphoqe nokukhipha izisu nokwehlisa isithunzi salesisikole esinedumela.
Omunye wothisha ongathandanga kudalulwe igama lakhe uthe lento ishubise umhlangano wothisha lapho omnuye obedinwe egane unwabu, ebhoboka ngalo ludaba.
Lo thisha kuthiwa uthe sekwanele, kumele kube khona okwenzekayo, kuthiwa ubhoboka-nje besekunezingane eziphumele obala ziceba othisha ababili zithi bayazishela.
Ekhuluma nentatheli ye-Eyethu Umlazi uThulani Khumalo onguthishanhloko kulesi sikole uvumile ngezinsolo wabesecela ukungaphawuli, wathi imibuzo ayibhekiswe kuMnyango wezeMfundo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMuzi Mahlambi uthe: “Umbiko esiwutholile yilo wokuthi kukhona othisha abashela abafundi hhayi abalala nabo, nakho ukushela umfundi okuyicala ngokwako ngoba izingane zethu siziyisa esikoleni ngoba sibethemba othisha futhi sibathatha njengabazali bazo isibili.”
Uqhube wathi loludaba selusezithebeni kubona kanti abazokuphenya ukushelwa kwabafundi okuyikho okubikiwe.
Ubeke nokuthi uma bekhona abanobufakazi bokuthi kade waqala lomkhuba nokuthi othisha balala nabafundi ucela baphumele obala nalapho bezokwandisa uphenyo.
Kubizwa abazali e-Adams College ngoJulayi 15